Iziphazamisi Zepilisi: Iziphazamisi Ezinhle Noma Ezimbi? Bangaba Bobabili! - Izinambuzane Zengadi
Iziphazamisi Zepilisi: Iziphazamisi Ezinhle Noma Ezimbi? Bangaba Bobabili!
Sibutsetelo Samaphilisi Bugs
Konke Mayelana Neziphazamisi Zepilisi
Umjikelezo Wempilo Wezibungu Zephilisi
Izindawo Ezivamile Zeziphazamisi Zepilisi
Zidlani Izimbungulu Zamaphilisi?
Ingabe Iziphazamisi Zamaphilisi Omakhelwane Abangalungile?
Ungasusa Kanjani Iziphazamisi Zepilisi
Ukulawulwa Kwesiphazamisi Se-Organic Pill
Ukulawulwa Kwezinambuzane Zepilisi Yezemvelo
Ukuvimbela Iziphazamisi Zepilisi
Q: Ingabe izimbungulu zamaphilisi ziyaluma? Ingabe izimbungulu zamaphilisi ziyingozi kubantu?
Q: Yini edla izimbungulu zamaphilisi?
I-Roly poly, izimbungulu ze-doodle, noma izimbungulu zamaphilisi ... noma ngabe yini ozibiza ngayo, laba ngabantu abathandwa kakhulu abahlala engadini.
Izingane zidlala nazo, zihehwa yikhono lazo lokugoqa zibe yibhola elincane. Amaxoxo nezibankwa bakuthola kuwukudla okumnandi. Futhi siyabathola kuzo zonke izingxenye ze-United States kanye nasekusabalaleni phesheya.
Kodwa ingabe izimbungulu ezikulungiselelwa ingadi ziyinkinga? Ngokuvamile, abantu babuza ukuthi izimbungulu zamaphilisi engadini zingabangane noma izitha.
izintengo zokususwa kwezinwele zobuso be-laser
Ake sikuhlole lokho ngokujulile! Ngizokusiza nokuthi ufunde ukuthi ungabavimbela kanjani ekubeni ngabahlali benkinga yangempela. Futhi sizoxoxa ngokuthi zingaba kanjani ukwengeza okunenzuzo ezingxenyeni ezithile zegceke lakho.
Imikhiqizo Emihle Yokulawula Iziphazamisi Zepilisi:
Ukudla Ibanga Diatomaceous Earth
Isifutho Sezinambuzane ZaseMonterey
I-Garden Safe Slug ne-Snail Bait
IMonterey Sluggo Plus
Amagama ajwayelekile Izimbungulu zamaphilisi, izimbungulu zamaphilisi, i-pilbug ejwayelekile, i-roly poly, izimbungulu ze-doodle, hlwanyela izimbungulu (ezihlobene kodwa azifani)
Amagama Esayensi I-Armadillidium vulgare (ukuhlwanyela izimbungulu zihlukile kepha izinhlobo ezihlobene, i-Oniscus asellus)
Umsuka Emhlabeni jikelele
Izitshalo Zithintekile Ithanda isitshalo esifile kepha izodla izicubu zezitshalo noma izithelo uma izitshalo ezibolayo zingatholakali
Izixazululo ezivamile I-grade grade diatomaceous earth, uwoyela we-neem, izifutho ze-spinosad noma ama-bait ayatholakala. Ukuvikela izithombo ngamashubhu wephepha lasendlini yangasese kuzigcina zingangeni. Ukuwaluma futhi uwahambise ngezinto zezitshalo ezibolile kungaba yinzuzo, ikakhulukazi uma uthuthela enqwabeni yomquba. Gcina izikhala zengadi ezingenamfucumfucu ezihlanzekile.
Iqoqo lezimbungulu ezi-roly poly noma izimbungulu zamaphilisi.
Okokuqala, ake sihlole ukuthi ziyini izimbungulu zamaphilisi, nokuthi yini ezingeyona.
Isiphazamisi esijwayelekile noma isiphazamisi sephilisi, i-Armadillidium vulgare, uhlobo lohlobo lwezinkuni. Ingxenye yomndeni we-Armadillidiidae wezinkuni, ziwuhlobo lwembungulu eligingqikela phezulu libe yibhola. Lokhu kuvikela ithenda labo ngaphansi kokulimala.
Izimbungulu zamaphilisi zivame ukudideka ne-bug bug, i-Oniscus asellus. Hlwanyela izimbungulu yi-Oniscidae, noma ingxenye yomndeni wentwala wezinkuni. Ngokungafani nezimbungulu zamaphilisi, azikwazi ukugoqeka ngokuphelele, zenze isimo se-C esikhundleni salokho.
Zombili izimbungulu zamaphilisi nokuhlwanyela izimbungulu zihlobene, futhi zombili ziyingxenye yeCrustacea, noma umndeni we-crustacean. Eqinisweni, azizona izinambuzane nhlobo. Zihlobene nama-lobster, izinkalankala, noma imfanzi!
Kuyathakazelisa ukuthi la ma-crustaceans yiwona kuphela ahlala ngaphandle kwamanzi. Zidinga inani elikhulu lomswakama ukuze zisinde. Kungakho bathambekele ezindaweni ezivikelekile, ezinomswakama ukuze baphile.
Kunesizathu esihle sokuthi kungani zombili izimbungulu zamaphilisi nokuhlwanyela izimbungulu zivame ukudideka. Bobabili babelana ngendawo efanayo eyisisekelo kanye nomthombo wokudla, futhi batholakala ezindaweni ezifanayo emhlabeni wonke. Zombili futhi zilawulwa ngezindlela ezifanayo.
Imbungulu yokuhlwanyela, u-Oniscus asellus, ihlobene kepha ayikwazi ukwenza ibhola.
Isiphazamisi somuntu omdala sowesifazane sizobekela amaqanda amaningi. Ngokungafani nezinambuzane eziningi, la maqanda ahlala naye, afihlwe ngokucophelela ngaphansi kwakhe. Izimbungulu zamaphilisi abesifazane zinesikhwama esibizwa ngokuthi i-marsupium esigcina amaqanda evikelekile.
Okwamasonto amane kuya kwayisithupha, uzophatha amaqanda akhe kule sikhwama sezingane. Lapho zichanyuselwa, zibukeka zifana nomzali wazo, kodwa ngesimo esincane. Ngemuva kokuchanyuselwa, izimbungulu zamaphilisi ezingane zihlala esikhwameni somzali wazo ezinye izinyanga ezimbalwa.
I-exoskeleton eqinile egoqeka ukuvikela isiphazamisi sephilisi kufanele ichithwe amahlandla ayisihlanu kuye kwayisithupha njengoba ikhula. Lokhu kwenzeka ngezigaba ezimbili. Okokuqala, i-poly roly izokhipha uhhafu ongemuva wegobolondo layo. Lapho lokho sekuguqukile, kuzokhipha uhhafu ongaphambili.
Kuthatha cishe unyaka ukuthi izimbungulu zamaphilisi zikhule ngokugcwele. Bazoshiya isikhwama sikanina cishe ezinyangeni ezine ubudala. Umzali angabeka iqanda elisha lamaqanda, akhiqize izizukulwane ezintathu ngonyaka.
Isikhathi sokuphila salawa ma-crustaceans amancane yiminyaka emithathu. Azizali ngokushesha njengabanye abahlala engadini, kodwa zingaba nentsha eningi ngaleso sikhathi!
I-bug bug iqala ukusonga.
Ezindaweni ezimnyama nezikhoselwe engadini yakho, uzovame ukuthola izimbungulu zamaphilisi. Bakhetha izindawo ezinomswakama, ezimnyama, futhi ezigcwele izinto eziphilayo ezibolayo. Ngaphezu kwalokho, zithanda ukuvikeleka ezilwaneni ezidla ezinye ezifuna ukuzondla ngazo.
ama-braids amafushane anemikhawulo esongekile
Imvamisa, bakhosela ngaphansi kwezingodo noma amatshe abolile. Imifantu emanzi nemifantu lapho kwakhiwa khona imfucumfucu yezitshalo nakho kuyizindawo zokuhlala ezifanelekile.
Izimbungulu zamaphilisi zikhetha ukuhlala ziseduze kwenhlabathi, futhi empeleni zingagobhoza kuzo uma kudingeka. Lokhu kusho ukuthi zingavela ngisho nasemibhedeni ephakeme engajulile. Kuvame kakhulu ukubathola ezingeni lomhlaba, noma kunjalo.
Uma ungazange ususe imfucumfucu engadini yakho, ingahle ibe yindawo yokuhlala neziphazamiso. Kuwukudla, indawo yokukhosela, futhi ilungele isinambuzane samaphilisi! Zijwayelekile futhi ezinqwabeni zomquba noma kwezinye izindawo lapho kunqwabelana khona imfucumfucu.
Ngesinye isikhathi, izimbungulu zamaphilisi zingathatha indawo yokuhlala ngaphakathi kwendlu yakho. Lokhu kwenzeka kuphela uma unendawo emanzi, futhi kungakhombisa ezinye izinkinga ngekhaya lakho. Ukuvuza kwamanzi noma ukhuni olubolile kungaba kubi kakhulu kunezivakashi ezimbalwa nje ezi-roly-poly!
Isiphazamisi esinamaphilisi amaningi. I-exoskeleton ihlelekile futhi ivumela ukugoba.
Izimbungulu zamaphilisi ziyingxenye yohlelo lokulahlwa kukadoti wemvelo. Zisebenzisa izinto zezitshalo ezibolayo ikakhulu, zihle kakhulu enqwabeni yomquba.
Ezweni eliphelele, izimbungulu zamaphilisi nokutshala izimbungulu zomhlaba kungathinta kuphela izingxenye zezitshalo ezifile. Maye, umhlaba wethu uphelele ngokuphelele. Uma kungekho okunye ukudla okutholakalayo, izitshalo eziphilayo ziba umgomo olandelayo.
Ngenkathi i-roly poly edla ama-strawberry ibonakala ingajwayelekile, kungenzeka. Izithelo ezisezingeni eliphansi zingaba ekudleni kwezinambuzane uma kuneziningi eziseduze. Kanjalo futhi nethenda, iziqu ezisencane zezithombo zezithombo.
I-balled ngokuphelele, lesi sinambuzane sephilisi sikwimodi yokuzivikela.
Kumanani avame ukuvela engadini ejwayelekile, izimbungulu zamaphilisi aziyona inkinga. Eqinisweni, ababonwa nakancane. Ngokuvamile kunenqwaba yezinto ezibolayo abangazitika ngazo.
Kungaleso sikhathi lapho isibalo samaphilisi sikhuphuka khona lapho singaba yinkinga enkulu. Uma unabantu abaningi, imfucumfucu yezitshalo ewile ingadliwa ngokushesha okukhulu. Futhi ngokungazelelwe, izitshalo zakho ziyalandelana.
Lokhu akusho ukuthi isinambuzane samaphilisi sihlala kabi engadini. Eqinisweni, abantu abaningi ngokuvamile akuvamile ukutholwa. Futhi uma kunezinye izindlela ezinikeziwe, zivamise ukushintshela ngaphesheya, zingazinaki izitshalo eziphilayo.
Lezi polies ezincane zingaba yinhle engadini yakho. Uma ungumlandeli womquba, uzofuna inqwaba yazo enqwabeni yakho. Bangakwazi ukudiliza izingxenye zezitshalo ngokushesha, bazihlafune zibe yizicucu ezincane. Lokhu kusheshisa inqubo yomquba.
Ngakho-ke bangomakhelwane ababi? Hhayi ngenhloso. Kodwa balambile, futhi bayakudinga ukudla. Uma unikezela ngemithombo ehlukile, bazoyidla leyo esikhundleni salokho. Uma ungakwenzi, izitshalo zakho zingaba sengozini.
Iphilisi lesiphazamiso elondla onqenqemeni lweqabunga.
Ungase ungafisi ukususa ngokuphelele izindawo zokuhlala zamaphilisi egcekeni lakho. Ake sihambe ngendlela yokulawula izimbungulu zamaphilisi engadini.
Kunezindlela ezahlukahlukene zokulawula okuphilayo ongazisebenzisa. Ngincoma ukusebenzisa lokhu kuphela ezitshalweni ofisa ukuvikela zona.
Ukudla grade diatomaceous umhlaba kungenye yezinketho ezilula kakhulu. Le mpuphu ecolekileyo eyenziwe ngamagobolondo e-diatoms izokhipha ingaphansi kwethenda lezimbungulu zamaphilisi. Akunabungozi ezitshalweni noma kubantu. Fafaza lokhu ezungeze isisekelo sezitshalo ukwenza umngcele abangeke bawele.
Thatha uwoyela ingasebenza kahle njengokuvikela futhi. Njengezinye izinambuzane, izimbungulu zamaphilisi azithandi ukunambitheka kwe-neem, futhi zizoguliswa yiyo. Kuwubuthi obuncane bamapholishi angcolile, kepha kuphephile kithi!
usuku lomama imibono yesipho sokudala
Uma kunabantu abaningi abaseduze kwezitshalo zakho, kunezinyathelo ezinqala zokuthatha. Izifutho ze-Spinosad njenge Isifutho Sezinambuzane ZaseMonterey ingasetshenziselwa ukubulala izimbungulu zamaphilisi ezeqile.
Ekugcineni, izingibe zomnenke neze-slug zivame ukusetshenziselwa ukudonsela ukunaka kude nezitshalo zakho. I-Garden Safe Slug ne-Snail Bait noma ISluggo Plus yizinyathelo ezinhle zokunciphisa izinombolo.
amaski obuso bezokwelapha anemiklamo
Ngenkathi izindlela ezichazwe ngenhla zisebenza, kunezinye izindlela ongazisebenzisa ukunciphisa ubungozi ezitshalweni.
Ukubeka amashubhu wephepha langasese azungeze izithombo kuvimbela izimbungulu zamaphilisi ukuthi zingafinyeleli kuzo. Izinkomishi ezindala zepulasitiki ezisuswe ngezansi zizosebenza ngokufanayo, kodwa ungaphuli njengamashubhu.
Ungakwazi ukucupha nokuhambisa izimbungulu zamaphilisi kwenye indawo. Beka inqwaba kadoti engadini yakho izinsuku ezimbalwa. Amaqabunga abolayo, izikhwebu zommbila, noma ngisho nohhafu wekantini kuzodonsela kubo izimbungulu zamaphilisi. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, thatha imfucuza bese uqoqa izimbungulu ukuze uthuthele kwenye indawo.
Uma unamakhabe noma ezinye izitshalo ezithelayo ezikhulayo, hlinzeka ngokusekela ukugcina izithelo zingasekho emhlabathini . Amakhabe, isibonelo, angaba nesihlibhi noma isando esenziwe ngezinto zakudala zesikibha ukuvikela isithelo. Ama-strawberry angatshalwa emikhombeni emincane ukuze amajikijolo alengele ezinhlangothini.
Izitshalo ezinamanzi ngaphansi kokuhlaselwa kwamaphilisi kungavikelwa, futhi. Ukulenga izitshalo zakho ezinamanzi noma ukuwafaka ku- ukhonkolo ebusweni kuzovimbela izimbungulu. Njengoba isinambuzane sidinga umswakama ukuze siphile sisendleleni yesitshalo sakho, lokhu kubeka ugwadule endleleni yabo!
Ayikho indlela eqinisekile yomlilo yokuvikela izimbungulu zamaphilisi engadini. Kepha bangakhuthazwa ukuhlala emibhedeni yakho yensimu.
Gcina imibhede yakho inakekelwa kahle, uhlanza imfucumfucu yezitshalo. Unganikeli ngezindawo zokuhlala ezihlanganayo zezinambuzane zamaphilisi eduze kwesikhala sakho sengadi.
Esikhundleni salokho, bahlukanise engxenyeni yomquba egcekeni lakho. Izimbungulu zepilisi yizimbungulu ezinhle kakhulu zomquba futhi zinenzuzo enkulu lapho! Uma wenza isikhunta seqabunga, noma unenqwaba ejwayelekile noma umgqomo, ungaheha izimbungulu kulokho. Ungazibeki ngaphakathi kwezingulube zomquba, ngoba ngeke zisinde kahle kuzo.
Ungabavumela futhi ukuthi bahlale ezindaweni lapho ukulimala kwabo kunganakwa. Isibonelo, izimbungulu zamaphilisi ezifihlwe emaphethelweni otshani bakho zingagxilisa utshani, kodwa awusoze waqaphela. Ngaphansi kwezihlahla ezindala ezingenakho ukutshala kungenye indawo enhle.
Zombili izimbungulu zamaphilisi nokuhlwanyela izimbungulu ziphendula izindlela ezifanayo zokulawula.
A: Ngamafuphi, cha no cha. Izimbungulu zamaphilisi azilumi, futhi azihlabi noma zidlulise izifo. Azihlaseli izinkuni ngendlela efana nomuhlwa (yize zingase zihlale ezindaweni ezibolile, ezinomswakama), futhi azihlaseli izingubo noma ukudla okufana nezinambuzane.
Izingane eziningi empeleni zinezimbungulu zamaphilisi ezifuywayo noma ziwasebenzisela amaphrojekthi afanelekile esayensi ngoba ziphephe kakhulu! Kumnandi ukudlala ngawo, ikakhulukazi uma ziqengqelana ziye kulawo mabhola aqinile, avikelayo.
A: Kunohlobo oluthile lwesicabucabu olwaziwa ngokuthi i-pill bug killer noma ukuhlwanyela i-bug killer. Zitholakala eduze kwalawa ma-crustaceans noma ngabe yikuphi lapho zivela khona ngokwemvelo, futhi lokho kuyinjongo yazo eyinhloko.
Ngaphandle kwezicabucabu, ezinye izidalwa eziningi zizodla izimbungulu zamaphilisi. Ama-Centipedes, amaxoxo nezinja, izintuthwane nezinyoni zingadla kulezi zingcezu zensimu. Izintwala ziphinde zizithole zimnandi. Ezindaweni lapho kunokuncintisana okuningi khona ngokudla, bangaze baphikisane!
Njengoba ukwazi ukubona, izimbungulu zamaphilisi aziyona ingozi njengezinye izinhlobo zabantu abahlala engadini. Ngokulawula okuhle, bazoba okunye ukwengeza okuzuzisayo engadini yakho. Unazo izimbungulu zamaphilisi noma uhlwanyela izimbungulu egcekeni lakho? Wake waba nezinkinga nabo? Tshela izinganekwane zakho kumazwana angezansi!
unkosikazi okokuqala ucansi lwendunu
izitayela zokuvikela izinwele ze-4c
izinwele ezinhle zezinwele ezixubekile
amaqhinga okukhulisa izinwele ngokushesha